Ikhompyutha ubuchwepheshe ziye zaba ingxenye yempilo yethu yansuku zonke. Umuntu ngamunye isebenzisa inqubo izinjongo ezihlukahlukene ukuhlangabezana nezidingo eziyisisekelo. Othile angase asebenzise ikhompyutha umsebenzi, abanye ukuthenga nge-Internet, kodwa iningi isebenzisa ikhompyutha njengenhlangano kudivayisi ukuzijabulisa kanye nokuxhumana. Phakathi kwabantu abangenalo leli khono abasebenzisi ethandwa kakhulu kukhona ezihlukahlukene okunjalo ikhompyutha, efana ikhompyutha ephathekayo.
Emihle nemibi laptops. Yini ngaphezulu?
Omunye izinzuzo phezu laptop kodokotela khona amabhethri ukusetshenziswa kwimodi azimele wodwa. Nokho, ukubonisa ngokucacile izinzuzo ratio bokwenza, kubalulekile ukuba bakuhlobanise nomunye.
Phakathi ukushiyeka amanothibhuku lanamuhla kungaba ukuhlukanisa izici iphedi. On onobuhle eziningi ngokuvamile kakhulu kunjalo, lapho ebonakalayo ayisebenzi (iphedi kukhompuyutha ephathekayo). Isixazululo sale nkinga, kuzoxoxwa ngakho ngemva kwesikhashana.
A inzuzo lwamakhompyutha ephathekayo yesibili kukhona yayincane. Kodwa kulesi simo, umsebenzisi kumele baqonde ukuthi kumele umhlatshelo okuthile. Ikakhulukazi, ukwehlisa ubungako abakhiqizi ikhompyutha bephoqeleka ukuba usebenzise ubuchwepheshe eyinkimbinkimbi yokukhiqiza main ingxenye izingxenye, kuphumele ukwanda okwalandela ukubaluleka notebook uqobo.
Othile ithanda lokhu ukuguqulwa ngenxa Ubukhulu encishisiwe nesisindo ongaphakeme. Nokho, lezi zibalo kusithinta ngempela ukusebenza hardware, okuyinto kuyancomeka namuhla.
Esivuna ukusetshenziswa laptops kuncipha khona izici ezifana, njenge-Wi-Fi adaptha, esakhelwe ikhamera nge-microphone kanye uyisikhulumi uhlelo oluhlangene. Nokho, abanye abakhiqizi ngezinye izikhathi ugcine on umsindo, ngakho abalandeli umsindo ezinhle futhi emsulwa amanye yokuxhuma ikholomu.
Njengoba ubona, ngoba zonke inzuzo ungakhetha yokuphambana ezifanele. Ngakho-ke, kumelwe baphetha ngokuthi isibalo izinzuzo cishe kulingana nesibalo kokushiyeka. Nokho, abantu abaningi, akhethe phakathi ideskithophu laptop amakhompyutha, ukuncika bubheke yokugcina ngezithukuthuku kalula yokusetshenziswa kuphi. Futhi ezimweni eziningi asesabi isimo lapho kungase kube inkinga ukuthi Ukuphenya akusebenzi.
Iphedi kwi laptop akuyona ukusebenza: kwezimbangela eziyinhloko. izindlela zokuxazulula
Lapha sibona ngokushelela futhi sesifike embuzweni othi kungani bapheqela imisebenzi. Iphedi kwi laptop empeleni izona behluleka ngenxa yezizathu ezihlukahlukene. Nokho, ukuze uxhumane nesevisi, kufanele oludingekayo ukuze kucutshungulwe futhi ufunde izixazululo eziyisisekelo. Ngakho, ngeke umsindise isikhathi nemali yakho, abantu abajabulayo ukuchitha yizinto ezibaluleke ngokwengeziwe.
Ngakho, umuntu wokuqala futhi isizathu esiyinhloko ngenxa okuyinto Ukuphenya akusebenzi (iphedi kukhompuyutha ephathekayo), - inkinga nge umshayeli. Kukhona izixazululo eziningana. Eyokuqala wabo - ukuzama kabusha computer. Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi umshayeli touch-pad akanayo isikhathi ukulayisha lapho ukuqala uhlelo lokusebenza. Uma inkinga iqhubeka emva Iqalisa, kufanele uhlole umshayeli uqobo. Ukuze wenze lokhu, vula "Properties Computer", etholakala uhlu kudivayisi, igama iphedi, vula impahla yayo, futhi ukubuka ulwazi mayelana umshayeli.
Isizathu sesibili, lapho ebonakalayo ayisebenzi (iphedi kukhompuyutha ephathekayo kuleli cala, abakwazanga ukumenza aphule) kungenzeka kanje. Abanye onobuhle anemisila inkinobho ekhethekile on / ukuvala touch-panel. Ngakho-ke, kufanele uqiniseke ukuthi umsebenzi umsebenzi iphedi icushiwe ngokuchofoza le nkinobho.
Inketho wesithathu umqulu ayisebenzi - ukushayisana kudivayisi. Lokhu kwenzeka uma usebenzisa igundane njalo, exhunywe nge-USB-isixhumi. Kumele cisha idivayisi futhi uhlole ukuthi kwakusenabakhulekeli inkinga.
Yini ebangela le nkinga lemikhiqizo ezahlukene?
Asus onobuhle aye anda nokwethenjelwa. Abakhiqizi ukhokha ngokukhethekile ubuchwepheshe isicelo. Futhi ngisho noma i-touchpad kukhompuyutha ephathekayo akusebenzi (umqulu), Asus-imodeli basikisela ukuthi lapho umuntu enezinkinga ezihambisana uhlelo lokusebenza, kodwa hhayi nge ihadiwe.
Brand Hewlett Packard zingenza ukuchaza lesi simo. Lapho iphedi kukhompuyutha ephathekayo akusebenzi (umqulu), HP-masevisi isizathu esiyinhloko uvame ukubizwa ngokuthi odla iphaneli doti encane.
Ingabe ngaso sonke isikhathi indlela enhle isabelomali?
Acer isabelomali inkampani laptops futhi ivame kakhulu ukuwela ezandleni yesevisi ukukhanda ochwepheshe. Futhi esinye sezizathu esesichaziwe - umshayeli iphedi. On the laptop ayisebenzi ebonakalayo Acer? Udinga ukuhlola inguqulo umshayeli futhi enze izinyathelo eziboniswe ngenhla. Uma inkinga iqhubeka, kungcono ukuxhumana nesevisi.
Ngeke ukusebenza ngaphandle isizathu ngamabomu ngoba Acer iphedi umugqa wama-notebook. Ukusebenza kahle ingase ibe sengozini ngisho izilungiselelo "BIOS" noma ukulahlekelwa ukuxhumana flex uxhuma panel.
Sifunda indlela ukuthuthukisa ukusebenza notebook
MacBook Zanamuhla: Kuyini lokhu?
Opera - omunye isiphequluli eyaziwa kakhulu futhi elisetshenziswa emhlabeni